KDE Kunyorera 20.12.1 kunouya neNeochat, kugadzirisa, kugadzirisa uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe kuwedzerwa kuwedzerwa KDE Kunyorera kubva munaNdira (21.12.1) yakagadzirirwa neiyo KDE chirongwa uye mune ino nyowani shanduro tinogona kuwana kusangana kweiyo nyowani Neochat mameseji application, iyo nyowani vhezheni yeKDevelop 5.6.1, kuwedzera kune iyo chokwadi yekuti yekugadzirisa vhezheni yePlasma 5.20.5 desktop yadarika rakaburitswa, mune iyo yakaunganidzwa zvikanganiso zvakabviswa.
Pakazara mune ino nyowani vhezheni yeKDE Kunyorera 20.12.1 (Ndira kuvandudza), 224 chirongwa, raibhurari uye plug-in kuburitswa kwakaburitswa.
Kune avo vachiri kusaziva nezve KDE Zvikumbiro, tinogona kukuudza izvozvo aya seti eanowirirana kunyorera uye maraibhurari akagadzirwa nenharaunda yeKDE, ayo anonyanya kushandiswa paLinux-based operating system, asi mazhinji eaya mafomu ari muchinjika-chikuva uye anoburitswa pane yakajairwa Launcher.
1 KDE Kunyorera 20.12.1 Main Zvitsva Zvimiro
1.1 Edza KDE Kunyorera 20.12.1
KDE Kunyorera 20.12.1 Main Zvitsva Zvimiro
Mune ino vhezheni nyowani yeKDE Kunyorera 20.12.1, pakati pezvakakurumbira zvitsva zvinomira kunze, tinogona kuzviwana izvo yekutanga yakakosha kuvhurwa kweiyo Neochat 1.0 mameseji chirongwa chakaitwa.
Neochat 1.0 inomiririra kutsigira yekutanga mameseji mashandiro, sekutumira mameseji uye mafaera, chats zvakavanzika, kuratidza zviziviso, kubatanidza kumakamuri, auto-kuzadza mazita evashandisi, kuisa Emoji, kutumira uye kugadzirisa mapepa.
Chimwe chinhu chitsva chinoratidzwa ndicho chinowirirana KIO Fuse 5.0.0, iyo inobvumidza chero chishandiso kuwana mafaira kune ekunze mauto.
KIO Fuse inoshandisa iyo FUSE michina yekuratidzira ekunze mafaera kune yemuno faira system, iyo inobvumidza kushanda pamwe kure mareti kwete chete kubva kuzvirongwa zvinoenderana ne KDE mafomati, akadai seKate neDolphin, asi zvakare kubva kunesimba zvichibva pane mamwe marongero, semuenzaniso, kubva MaharaOffice.
Zvakare, KDE Kunyorera 20.12.1 inopa izvo zvitsva zvinoburitswa uye kuwiriraniswa ne hutano hwekuteedzera maapp MyGnuHealth, iyo gKGeoTag geotagging software, uye musangano weKongress kuronga hurongwa.
Kune rimwe divi, mune iyo Dolphin faira maneja izvi zvinopunzika kana iwo ekuvhura tebhu achigadziriswa, kuwedzera kune gadzirisa bhagi muOkular gwaro rinoona , que yaidzivirira kuvhura mafaera muMarkdown fomati.
Kana iri yaGwenview, inoshandisa iko kusevha kwakaringana kwemhando yemhando yekugadzika muJPEG fomati uye muKonsole dambudziko rekuratidzira mavara ezvakashinga mavara mune yekupedzisira emulator yakagadziriswa.
Iyo Kaidan XMPP mutengi yakagamuchira rubatsiro rwekushandisa yekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera maitiro uchishandisa iyo OMEMO protocol.
Zvakare, isu tinogona kuwana iyo nyowani yekugadzirisa vhezheni yenzvimbo yekuvandudza KDevelop 5.6.1, izvo kwete chete gadzirisa tsaona iyo mune dzimwe nguva yakaratidzwa kana ichiedza kutanga inoitwa, asi zvakare yakawedzerwa Python 3.9 uye GDB 10 rutsigiro, uye kugadzirisa bug.
Pakupedzisira, mune kushambadzira ataurwa nezvezvirongwa zvekusimudzira kwe KDE muna 2021 uye nzvimbo dzakakosha dzinozotariswa nevasimudziri ndeidzi:
Ita rutsigiro ruzere rweWayland-based KDE zvikamu.
Inoenderera mberi kuvandudzwa kwePlasma Mobile chikuva.
Tsigira zvigunwe zvigunwe mu SDDM, Screen Saver, KAuth, uye Polkit.
Kuzadzikiswa kwechimanje manje cheBreeze theme.
Kickoff app menyu kutsiva neyekushandisa nyowani.
Ipa kugoverwa kwemavara muKonsole kana chinongedzo chichigadziriswa.
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi nyowani yakaburitswa KDE Kunyorera 20.12.1 yekuvandudza, unogona kutarisa izere changelog mukutanga kuburitswa. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Edza KDE Kunyorera 20.12.1
Finalmente, iyi nyowani nyowani ichave ichiuya zvishoma nezvishoma kune akasiyana Linux mugove, saka kana isingawanikwe yako kugovera parizvino, uchafanirwa kuve nemoyo murefu.
Kunyangwe futi, kana iwe uchinge uchinge uchida kuyedza shanduko dzeichi chiitiko zvakasiyana zvikamu zvinogona kuyedzwa zvakasiyana nerubatsiro rwehunyanzvi hwe Flatpak mapakeji.
Mune ino peji Ruzivo nezve kuwanikwa kweRarama-gungano pamwe neshanduro nyowani dzekushandisa dzinogona kuwanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » KDE Kunyorera 20.12.1 inosvika neNeochat, kugadzirisa, kugadzirisa uye nezvimwe